February 2020 – Gulled Salah
Casho sharaf Safaaradda Switzerland usamaysay wafdiga TPEC.
Caawa waxaa casho sharaf usameeyay wafdiga Guddiga ee Nairobi ku sugan Safaaradda Switzerland. Casha sharafta waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay Safaaradaha Sweden, Midowga Yurub, Denmark, Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya (SSF) iyo Hay’ada SAHAN.Guddigu wuxuu umahadcelinayaa Safaaradda Switzerland oo ahayd safaaraddii uhoraysay oo Guddiga kala shaqaysay hirgalinta hannaanka xisbiyada badan ee Puntland. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Kulanka TPEC iyo Safaaradda Denmark.
Wafdiga Guddiga ee Nairobi ku sugan ayaa maanta shir layeeshay JP oo ka tirsan madaxda dhinaca horumarinta ee safaaradda Denmark. Waxay labaada dhinac iska waraysteen hawlaha Guddiga u qabsoomay, kuwa qorshaysan iyo sidii Denmark qayb uga qaadan lahayd hirgalinta hannaanka xisbiyada badan ee Puntland. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga CodkaaguWaaMustaqbalkaaga.
Kulanka TPEC iyo SSF.
Kulan ayaa maanta Nairobi ku dhexmaray masuuliyiin ka kala socda Guddiga iyo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya (Somalia Stability Fund – SSF). Kulanka ayaa qayb ka ah kulamo Guddigu uu la yeelanayay masuuliyiin ka socda beesha caalamka iyo hay’adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha dimuqraadiyada si loo sameeyo iskaashi ku aaddan hirgalinta hannaanka xisbiyada badan ee …
Kulanka TPEC iyo SSF. Read More »
Kulanka TPEC iyo Midowga Yurub.
Wafdiga Guddiga KMG ee Doorashooyinka Puntland ee Nairobi ku jooga booqashada ayaa saaka la kulmay madax ka socota Midowga Yurub, gaar ahaan qaybta “Dawladnimada iyo Dimuqraadiyada”. Labada dhinac waxay ka wada xaajoodeen sidii Midowga Yurub uga qaybqaadan lahaa hirgalinta hannaanka xisbiyada badan ee Puntland. Waxaa la isku raacay in laga wadaahaqayndoono hirgalinta hannaankaan iyada oo …
Kulanka TPEC iyo Midowga Yurub. Read More »
Guddiga oo Nairobi kula shiray deeq bixiyayaasha
Xubno ka tirsan Guddiga oo uu hogaaminayo Guddoomiayaha Guddiga Guuleed Saalax ayaa Nairobi maanta kula shiray deeq bixiyayaal ka socda beesha caalamka ayna ka mid ahaayeen UK, USA, Denmark, Sweden, Switzerland, SSF iyo hay’adaha InterPeace iyo Sahan. Kulanka oo ka dhacay safaaradda UK ee Nairobi waxaa looga hadlay waxyaalaha Guddiga u qabsoomay iyo sidii Puntland …
Guddiga oo Nairobi kula shiray deeq bixiyayaasha Read More »
Guddiga oo la kulmay Hay’adaha Dawladda, siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee Puntland.
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa maanta kulan baalaaran la qaatay masuuliyiin ka socda hay’adaha dawladda, siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee Puntland. kulanka oo noqodoona mid 3 biloodle ah waxaa guddigu kusoo bandhigidoonaa wixii qabsoomay 3da bilood ee tagay, wixii caqabado ah iyo doodwadaag dhexmaridoona Guddiga iyo qaybaha kala duwan ee dawladda iyo bulshada. Guddigu …
Guddiga oo la kulmay Hay’adaha Dawladda, siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee Puntland. Read More »
Guddiga oo manta kulan la qaatay Gudoonka Baarlamaanka.
Guddiga KMG doorashooyinka Puntland ayaa maanta kulan la qaatay Gudoomiye ku xigeenka 1aad, 2aad iyo xoghayaha baarlamaanka. Kulanka waxay labada dhinac iskaga wareysteen waxyaabihii kasoo baxay safarkii Guddigu gobolada kusoo mareen, iyagoo isla jeex jeexey kaalinta baarlamaanka ee hirgalinta hanaanka xisbiyada badan iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah oo Puntland ka dhacda. https://www.facebook.com/TPECPuntland CodkaaguWaaXaqaaga …
Guddiga oo manta kulan la qaatay Gudoonka Baarlamaanka. Read More »
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland oo la shiray maamulka iyo shacabka Gobolka Nugaal.
Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre, ayaa saaka kulan kula yeeshay casumada Puntland ee Garoowe maamulka Gobolka Nugaal oo uu ugu horeeyo Guddoomiyaha Gobolka Mudane Cabdisalaan Xasan Xirsi, kan Degmada oo uu ugu horeeyo Duqa Caasimadda Mudane Axmed Siciid, guddiga joogtada ah ee golaha deegaanka Degmada iyo qaybaha kala …
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland oo la shiray maamulka iyo shacabka Gobolka Nugaal. Read More »
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo la shiray madaxda Wasaarada Arrimaha Gudaha, Dimoqraadiyaynta iyo Arrimaha Federaalka PL.
Guddiga KMG doorashooyinka Punland ayaa saaka xarunta dhexe ee Guddiga Kulan kula qaatay madax ka socda Wasaraadda Arrimaha Gudaha, Dimuqraadiyada iyo Arrimaha Federaalka oo uu hogaaminayo Wasiir Maxamed Dhabanacad. Guddigu iyo Wasaaraddu waxay guud ahaan iska waraysteen arrimaha dimuqraadiyadda Puntland, gaar ahaan waxaa kulanka xoogga lagu saaray arrimaha xuduudaha degmooyinka, wacyigelinta dadweynaha iyo dhamaystirka xeerarka …
Guddiga KMG ah ee Doorashooyinka Puntland oo la shiray madaxda Wasaarada Arrimaha Gudaha, Dimoqraadiyaynta iyo Arrimaha Federaalka PL. Read More »
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland oo la shiray maamulka iyo shacabka degmada Eyl ee Gobolka Nygaal.
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Guddiga Guuleed Saalax Barre, ayaa saaka waxay la kulmeen maamulka oo ugu horeeyo Gudoomiyaha degmada Eyl Muuse Cisman iyo qaybaha kala duwan ee dadweynaha Degmada Eyl ee gobolka Nugaal.Guddiga ayaa dadweynaha degmada la wadaagay jadwalka doorashada dawladaha hoose iyo qorshaha hannaanka xisbiyada badan ee Puntland …
Guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland oo la shiray maamulka iyo shacabka degmada Eyl ee Gobolka Nygaal. Read More »